iOS 15 inogona kusasvika kune iyo iPhone 6S uye iPhone SE | IPhone nhau
Iwe unayo iPhone 6S kana iPhone SE?: IOS 15 inogona kusasvika kune yako kifaa
Ngirozi Gonzalez | | iOS 15, Noticias
2020 rave riri gore risinganzwisisike reApple futi. KuWWDC muna Chikumi akapa iOS 14 uye macOS Big Sur. Iyo nyowani yekushandisa sisitimu yeDevices yakavabvumira kuti iiswe pane imwecheteyo madivayiri seIOS 13. Ndokunge, IOS 14 kuenderana kwaipenya. Nekudaro, macOS Big Sur yagadzira mamwe makomputa akadai seMacBook Pro kubva pakati pa2012. Kunyange hazvo paine inopfuura hafu yegore yekuziva nhau dzeiyo nyowani iOS 15, patova nerunyerekupe rwekuti iyo foni 6S uye iyo iPhone SE, zvese neiyo A9 chip, zvaisazowirirana neiyi nyowani vhezheni yeIOS.
Ko iyo iPhone 15S uye iPhone SE ichataura zvakanaka kune iOS 6?
Iyo iPhone 6S uye 6S Plus yakaona mwenje munaGunyana 2015 nepo chizvarwa chekutanga iPhone SE chakachiona munaKurume 2016. A9 chip mbiri-musimboti ine 64-bit dhizaini. Gore rinotevera 2021 michina iyi ichave iri pakati pemakore mashanu neatanhatu ekuberekwa uye kubvira ipapo anga achienderana neshanduro dzese dzeIOS, kubva kuIOS 9 kuenda kuIOS 14. Mune ese matanhatu makuru ekuvandudza, kunyangwe iwo azvino ane mashoma mashoma mashoma.
Zvisinei, makuhwa ekupedzisira anoratidza izvozvo iOS 15 haizoenderane neiyo iPhone 6S uye SE. Kana izvi zvikasimbiswa, zvaizovhara kutenderera kwemahombekombe makuru uye kuyambuka se mazambiringa michina miviri iyo ichiri kuwedzera pakati pevamwe vashandisi veApple. Iyi danho ingave nzira yekusundira vashandisi ava kuti vawane zvimwe zvigadzirwa zvitsva zveapuro hombe senge iyo iPhone SE 2020 kana iyo iPhone 12.
Zvechokwadi, tsime kunongedzera kune chii IOS 15 kuburitswa ichave Nyamavhuvhu 21, 2021. Kupfuura zvese izvi, hapana ruzivo maererano nenhau idzo nyowani yekushandisa system inogona kuve nayo. Izvo zviri pachena ndezvekuti kunyangwe iri runyerekupe, zvinonyanya kuitika sezvo mashandiro ekuita kwesystem nyowani dzekushanda aigona kuve akakwirira kupfuura mashandiro ayo maPhones akare anogona kupa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iwe unayo iPhone 6S kana iPhone SE?: IOS 15 inogona kusasvika kune yako kifaa
Aya ndiwo mashandiro anoita Intercom nemaPodPods
Maitiro ekudzima Twitter Fleets